धादिङमा मन्दिर दर्शन गरेर फर्किदै गरेका यात्रु बोकेको ट्रक दुर्घटना : ६ जनाको निधन, २५ घाइते ! « Etajakhabar
धादिङमा मन्दिर दर्शन गरेर फर्किदै गरेका यात्रु बोकेको ट्रक दुर्घटना : ६ जनाको निधन, २५ घाइते !
प्रकाशित मिति : ७ माघ २०७६, मंगलवार १८:२३
काठमाडौ । धादिङमा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा ६ जनाको निधन भएको छ । दुर्घटनामा २५ जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । निलकण्ठ नगरपालिका वडानम्बर ८ मैदीभञ्जाङमा ग १ ख १२८० नम्बरको ट्रक पल्टिएको हो । ट्रकमा मण्डली दर्शन गरेर फर्किएका निलकण्ठ–२ भुलभुलेका स्थानीयबासी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जनाएको छ ।
ज्वालामुखी गाउँपालिका ४ बाट धादिङबेसी फर्किदै गरेको ट्रक निलकण्ठ नगरपालिका ९ मैलीभञ्ज्याङमा सडकमै पल्टिएको हो। ट्रकमा करिब ४० यात्रु सवार रहेको अनुमान गरिएको छ। प्रत्यक्षदर्शी विजय अधिकारीका अनुसार तीब्र गतिका कारण आइचर दुर्घटना भएको हो। दर्जनौ यात्रुसँगै चालक गम्भीर घाइते छन्। घाइते सबैको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ। दुर्घटनाका गम्भीर घाइते १५ जनालाई उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको एसपी रेग्मीले बताए। अन्य घाइतेको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ।